Khabar Nirantar | » छोरी वामिकालाई किन लुकाउछन् अनुष्का र विराट ? छोरी वामिकालाई किन लुकाउछन् अनुष्का र विराट ? – Khabar Nirantar
छोरी वामिकालाई किन लुकाउछन् अनुष्का र विराट ?
मुम्बई(बलिउड लाइफ)– बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र उनका क्रिकेटर पति विराट कोहलीको फ्यान फलोइङ संख्या उल्लेख्य छ भनेर भनिरहनुपर्दैन । उनीहरु जहाँ उपस्थित हुन्छन्, त्यहाँ मिडिया र फ्यानको उपस्थिति बाक्लो नै हुन्छ ।
उनीहरुको एक छोरी वामिका छिन् । यो जोडीले वामिकालाई हालसम्म लुकाई नै रहेका छन् । अझ भनौं वामिकाको लुक्स कस्तो छ भन्नेसमेत कसैले थाहा पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अनुष्का र विराटले वामिकाको अनुहार देखिने तस्वीर राखेका छैनन् ।
अनुष्काले वामिकालाई कहिँ कतै लिएर जाँदा पापराजीबाट बच्नका लागि अनुहार लुकाउने गरेकी छन् । उनीहरुको यो गतिविधिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु अनुष्का र विराटलाई छोरीलाई बढी संरक्षण गरेको भन्न पछि परेका छैनन् ।
अनुष्का र विराट आफ्नो छोरीलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा बहस होस् भन्ने चाहँदैन् । वामिकाले के लगाउँछिन्, उनको अनुहार विराट वा अनुष्का कोसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने जस्ता विषयमा बहस नहोस् भन्ने अनुष्का र विराटको चाहना छ ।
विराट र अनुष्काले आमा बनेका अन्य सेलिब्रेटीले सन्तान लुकाउन गरेको उपायलाई अपनाएका छन् । वामिका आगामी फेब्रुअरी २०२२ मा एक वर्षको हुँदैछिन् । त्यसकारण पनि धेरैले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा वामिकाको लुक्स देख्न पाउनेमा आशावादी छन् ।